Nigeria waxay ku nooshahay xaalad murugo leh | Dhaqaalaha
Nigeria, waa wadanka hodanka ku ah dadka saboolka ah
Nayjeeriya waa dal ku dhex milmay jahwareer riwaayadeed. Maadaama ay dadkeedu sii badanayaan saboolnimada. Umada ugu dadka badan qaarada afrika isla markaana ugu saliida badan soosaarka qaarada madow waxay aragtay in dhaqaalihiisu kor u kacay ilaa 60% sanadihii la soo dhaafay, taas oo ka hor marineysa South Africa xogta Bangiga Aduunka.
Si kastaba ha noqotee, sahankii ugu dambeeyay ee ku saabsan heerka saboolnimada ee dalkan, oo la daabacay 2012, wuxuu muujinayaa in 61% dadka reer Nigeria ay la nool yihiin in ka yar hal doolar maalintii marka la barbardhigo 52% sanadkii 2004. Aagga waqooyiga, halkaasoo ay ku xisaabtameyso Amnesty International in ka badan 600 oo qof ay ku dileen kacdoonnada Islaamiyiinta illaa iyo sannadkan, saboolnimadu xitaa way kasii daraysaa
Tirooyinkan ayaa hoosta ka xarriiqaya Ciladaha dowladda Nigeria iyo isku dheelitir la’aanta dhaqaale ee jirta. Sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, dhaqaalaha dalku wuxuu kordhay 6% intii lagu jiray 2006, laakiin isla sanadkaas ilaha cuntada ee dadku waxay ahaayeen kuwa ugu yar adduunka. Afrika.
Nayjeeriya waxay ku baxdaa shidaalka ka yimaada koonfurta dalka. Cayriinku wuxuu u taagan yahay 80% wadarta dakhliga dowladda iyo 95% waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso. Iyada oo ay waxaas oo dhami jiraan, 24% shaqaaluhu waa bilaa shaqo, waddan meesha, xiisaha leh, 62% ka mid ah 177 milyan ee deggan ay da'doodu ka yar tahay 25 sano. Sidaa awgeed, shaqo la'aanta dhalinyarada waxay khatar weyn ku noqon kartaa xasilloonida dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalka
Haddii saliid ay jirto koonfurta, waqooyiga Nigeria 80% dadka ku nool waxay ku nool yihiin meel ka hoosaysa heerka saboolnimada. Fursado la’aanta ayaa sababtay in malaayiin qof ay u haajiraan koonfurta iyagoo shaqo raadinaya. Tan waa in lagu daraa khilaafaadka kooxaha islaamiyiinta ah ee isku daya inay khalkhal geliyaan dowladda ololeyaal argagixiso oo horeyba uga tagay kumanaan qof sannadihii la soo dhaafay.
Qeybinta sinaanta ee hantida saliida ayaa si sax ah u adkeysa Is diidsiinta dhaqaalaha Nigeria. Waddan doonayey inuu horumariyo qaybaha saliidda, bangiyada iyo isgaarsiinta oo meel iska dhigay beeraha iyo kuwo kale. Haddii dowladdu gacan siiso kuwa naftooda u huraya dhulka wax badan, waxaa laga yaabaa in isu dheelitir la'aanta aan sidaa u weyneyn.
Ugu dambeyntiina, horumarka bulshada ayaa gaabis ku ah dalka Nigeria. Marka lagu daro Afghanistan iyo Pakistan waa wadamada kaliya ee aduunka ee wali cudurka dabeysha uu ka jiro. Kaliya waa tusaale yar laakiin naxariisdarro ah sida ay weli u baahan tahay inay u kororto.
Sawir - Cadceed
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Nigeria, waa wadanka hodanka ku ah dadka saboolka ah
Turkiga, Erdogan iyo dhibaatooyinkooda dhaqaale ee halista ah
Musuqmaasuq ayaa ruxay dhaqaalaha Hindiya